Wholesale PP kurongedza bhandi extrusion mutsara Mugadziri uye Mutengesi | Qiangsheng
Kugadzirwa kwezvinhu zvakasvibirira kunogona kushandiswa kugadzira mabhandi ekupakata nezvinhu zvakagadzirwazve kana zvakasanganiswa zvitsva. Izvo zvakare zvinokwanisika kuwedzera calcium carbonate zvinoenderana nemamiriro evatengi kudzikisa kugadzirwa kwemitengo, kuwedzera chigadzirwa purofiti, uye kukwikwidza kwemusika.
1. Kugadzirwa kwezvinhu zvakasvibirira kunogona kushandiswa kugadzira mabhandi ekupakata nezvinhu zvakagadziriswa zvakare kana zvakasanganiswa zvitsva. Izvo zvakare zvinokwanisika kuwedzera calcium carbonate zvinoenderana nemamiriro evatengi kudzikisa kugadzirwa kwemitengo, kuwedzera chigadzirwa purofiti, uye kukwikwidza kwemusika.
2. Kuburitswa kwacho kwakakwirira, uye kumhanya kwetambo kumhanya kunogona kusvika 260m / min.
3. Kuonekwa kwemuchina wese kwakagadziridzwa, kwakanaka uye kwepamusoro-giredhi, kunogara nekusimba.
4. Yakakwira-chaiyo kufa zvikamu zvinoita kuti chigadzirwa chigadzire mhando kugadzikana, hupamhi uye ukobvu kushanduka kuri kure zvishoma kupfuura muyero wenyika; yakasarudzika network inoshandura chishandiso inoderedza zvakanyanya network kuchinja nguva.
5. Yakakwira-chaiyo yepamusoro-soro sikuruu, uchishandisa inozivikanwa zita, yakasarudzika paramende dhizaini, ine zvakanakira kuburitsa kukuru, kupurasitiki kwakanaka, kuomarara kwepamusoro uye kukwirira kwekupfeka.
6.Gadzira yakasarudzika yakaoma giya yekudzora, yekumhanyisa kupfeka uye hwakareba hupenyu hwebasa.
7. Yakasarudzika dhizaini yekugadzirisa mudziyo kudzora chigadzirwa skewness.
8. Yakasarudzika ovhoni loop kudziyisa sisitimu, yemukati inodzosera nzira yekumisikidza, kushandisa zvizere simba rekupisa kudzora zvakanyanya kurasikirwa kwesimba.
9. Yakasarudzika yekutambanudza maitiro, ine yakanaka kuomarara uye yakagadzikana upamhi.
10. Yakasarudzika chiuno kutonhora sisitimu, akati wandei seti yekutenderera roller, izvo zvinoita kuti tambo itonhorere uye kudzikira zvakanyanya kukwana, chigadzirwa chinogadzikana uye saizi yakanyatsoita.
11. Mashanu-roll roll traction system, iyo traction yakagadzikana, iyo michina inomhanya zvakanaka, iyo yekukundikana mwero yakadzikiswa, uye mutengo wekuchengetedza wakaderedzwa ne60%.
12. Yakakwira-chaiyo chaiyo embossing uye yekutsikirira mudziyo, inogadziriswa kumanikidza, yakajeka uye yakanaka embossing, yakavandudzwa chigadzirwa mhando, yakafanana neEuropean, America, Japan neSouth Korea.
13. Constant simba ichitenderera system, yakasarudzika dhizaini parameter, inoenderana neakakwira kuburitsa, yakanakisa tepi ichitenderera mhedzisiro, yakati sandara uye yakanaka chikamu.
14. Wheel uye shaft zvikamu zvakagadzirwa neepamusoro-simba alloy simbi. Iyo magiya anogadziriswa ne carburizing, kudzima uye kukuya, uye iyo yekundikana chiyero chinoderedzwa ne60%.
15.Kushandisa komputa programming control system, otomatiki memory tambo yekugadzira dhizaini yedhata, iri nyore kushanda, nyore kugadzirisa.
16. Iyo PP yekugadzira tambo ine mabhandi mana, uye yakagadzika yekugadzira vhoriyamu inosvika 5-6 matani pazuva! Chazvino chigadzirwa PP yekugadzira tambo ine mabhandi matanhatu, inova yekutanga muindasitiri.
17. Inesarudzo no-stop otomatiki screen chinja! Wedzera mabhenefiti.
Pashure: PVC Cable Trunking Inowedzera Mutsara
Zvadaro: PVC Inopupuma Furu Bhodhi Inowedzera